IPurita Campos. Umbhali kaEsther uneminyaka engama-80. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Izaziso
Iifoto: uEsther wam ohlekisayo. IPurita Campos 'ivela kwiPlaneta Libros.
Ibizwa ngokuba yiPurificación Campos Sánchez, kodwa kuye wonke umntu ikho kwaye iya kuhlala ihleli IPurita Campos (IBarcelona, ​​1937). Isenokuba yi Umdwebi wekhathuni kunye nombhali yamahlaya aseSpain. Ewe yena kunye naye uvela eBarcelona UMaria Pascual bezizezona zinkulu. Kwaye kulo nyaka uPurita ucima amakhandlela e Isiphelo 80 iyahambelana. Besichanekile ngokuchanekileyo Amantombazana angama-80 (kwaye ngokuqinisekileyo baninzi abantwana) abo kuthi abaphucula ukufunda kwethu kodwa ngaphezulu kwako konke siyonwabele indalo yakhe edumileyo, UEsther lucas.
Ezo zihlekisa zam ukusukela ngoko, zigcinwe njengegolide kwilaphu, kunye nokufunyanwa kokuphinda kwenziwe umsebenzi wakhe kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwaye, nangona sele ndizifundile, ndilinde i-albhamu yenqanaba lakhe elitsha kunye neenoveli ezimbini. Ufanele eli nqaku Njengombulelo nombulelo. Makubekho ezinye ezininzi, iPurita. Y I gracias Ngamaxesha amaninzi amnandi.
2 Kumazwe aphesheya
3 U-Esther kunye nehlabathi lakhe
3.1 Kwaye ngenye imini uEstere wakhula
4 UGina noJana
UPurita Campos uqale ngokuzinikela ekubonakaliseni iimagazini zefashoni emva koko waqala ukusebenzela indlu yokupapasha Bruguera enkosi kumzobi Manuel IVázquez. Ekuqaleni wayephethe amaqweqwe kwaye kamva waba nguye hlamba ikhathuni kwiimagazini zabasetyhini ezifana Dalia (1959) sissi (1961) okanye lily (Ngo-1974). Wayenze ubuGcisa obuhle kwaye wayefuna ukuba ngumdlali weqonga. EBruguera wahlikihla amagxa nawo wonke umntu ezinkulu yee-comics zaseSpain ezivela kuVictor Mora, eVázquez okanye e-Escobar ukuya, ewe, kuFrancisco Ibáñez.
Kwakusekuqaleni kwe- kwiminyaka yama-70 ukuqala kwakhe ukusebenza iimagazini zesingesi ngokusebenzisa iarhente yoHlelo lweCreaciones. Le yindlela ayibonise ngayo imibhalo ayisayinileyo UFilipu douglas uthotho Ilizwe likaPatty, eyaguqulelwa kwiSpanish njenge U-Esther kunye nehlabathi lakhe. La manqaku ahlala ixesha elide kude kube ngo-1988 no yeza ibaleka ngeveki phakathi kwe-300 kunye ne-000 iikopi kumazwe amaninzi ehlabathi. Kwi imarike yaseDatshi siya kupapasha ukusuka ku-1975 olunye uthotho oluyimpumelelo, tina, umlinganiswa ophambili kwimagazini engaziwayo kwaye e-Castilian wayengumlingiswa kaJana.
U-Esther kunye nehlabathi lakhe
Kuninzi esele ibhaliwe ngo-Estere ukuba ndinokuyenza kuphela Ukusuka entliziyweni nakwiminqweno. Ndicinga ukuba iinkumbulo zam zokuqala zabahlekisi bakhe ukusukela ngonyaka we-79of a Inyibiba enkulu apho kwavela ikhathuni yakhe, apho babelinde ukuqhubeka. Nam ndiyagcina amanani ahlukeneyo e lily, kubandakanya umxholo we ukhetho. Kwaye abo basefotweni, eyokugqibela, enoqweqwe oluqinileyo, ukusukela ngo-1985. Ngelo xesha Ipop ephezulu noEstere othandekayo wadlulela kwindawo ebekekileyo, kodwa akalibali.
Bakhe Iihambo, kubalwa kwi umntu wokuqala, ingangumntu ngamnye kuthi. Kwaye kukuba sonke sinokuba nenye Rita njengaye umngani ogqibelele, okanye enye carol, la usisi omdala owayehlala ebandakanyeka kumakhwenkwe okanye kwimisebenzi, a Umama onoxinzelelo kunye nothando okanye a Utata silahlekile. Singaphinda sibe nomsindo kwaye sibe lusizi ukubona umama wethu ofumene enye indoda, the umalume ted, leyo, ekugqibeleni, sagqibela ngokwamkela nothando. Ngaphandle koko, sinodade wethu omncinci, ILaurita, ekufuneka siyigcinile.
Kwaye sinokuba nayo Doreen oyinyani, loo nto yabenza bakrakra ubomi bethu nanini na kunokwenzeka. Kodwa, kwaye kunjalo, sinokubanakho (okanye asinabo) UJuanito. I-blond, intle, inemidlalo, iyingozi kwaye ihlala isenza impambano.
Iindawo zikaEstere zazizezethu, kwaye Izikripthi zikaPhilip Douglas zazi indlela yokubonisa ilizwe lokufikisa ngendlela engafani nenye. Ukungazithembi kwabo, iintloni zabo, izakhiwo zabo, uloyiko lwabo, abalandeli babo, usizi lwabo kunye novuyo lwabo. Kodwa uyayithanda i Imivumbo kunye nemigca ephawuleka kangaka, eyenziwe ngesitayile kunye nenobuhle yoyilo kunye nokuzoba ibaluleke kakhulu okanye ibaluleke ngakumbi. Indawo yaseBritane neyasedolophini, imibala ... Yonke into ibiyi isihloko seengoma ukuze amabali abo anyanzelise kwaye abandakanyeke.
Kwaye ngenye imini uEstere wakhula
Ngo-2006, kunye nombhali wamabali ahlekisayo kunye nomabonakude uCarlos Portela (1967), uPurita wapapasha iThe New Adventures kaEsther apho sele ikhona Ndandineminyaka eyi-40, njengathi. Ewe, sikwabonisiwe kuyo. Uqhawule umtshato kunye nentombi, Ntombi awuthethi noRita kwaye ngoku kunjalo ngoku Umhlobo kaDoreen. Kwakhona, udibana noJuanito kwakhona okwenzekayo ukuba ngumphathi we-Chelsea kwaye utshatile. Ngamanye amagama, iihambo ezintsha ezisitsala kwakhona kwaye, ukongeza, zikwimo yencwadi kwaye ezimbini zipapashiwe. Izihloko zezi UEstere ugqiba iminyaka engamashumi amane y Ukhetho lukaEstere.
Ukuphinda kuthunyelwe kwakhona UGina noJana, Abalinganiswa abadumileyo abavela kwiPurita Campos, nangona bengathandwa njengoEsther. Kuqala kwafika enye ye Gina, kwi 2005, umqulu wezahluko ezi-5, ngombala omnyama nomhlophe. Kwaye loo nto Jana, la imodeli yamanye amazwe ohambahamba kwihlabathi liphela kwaye wazifumana ebandakanyeka iimeko ezimangalisayo isonjululwe ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » IiComics » IPurita Campos. Umbhali kaEsther uneminyaka engama-80.
Iincwadi ezi-7 ezishelfini zevenkile zeencwadi